Otu esi ede onye kacha ere ere: igodo iji mee nke ọma | Akwụkwọ ugbu a
Otu esi ede onye kacha ere ere
Encarni Arcoya | | Ndị edemede
Mgbe ị na -eche maka ide akwụkwọ, ihe ị chọrọ bụ na nke a, mgbe ị tinyere ya n'ahịa, ọtụtụ mmadụ na -azụrụ ya, gụọ ya, nye gị echiche ha ... Na nkenke, na ọ ga -aga nke ọma. Agbanyeghị, nke a siri ezigbo ike iru. N'ezie, ọtụtụ na -apụta n'ihi ọrịa ihu ọma, n'ihi na ebuputara ha n'oge kwesịrị ekwesị ma ọ bụ n'ihi na ha nwere nna ma ọ bụ nne. Nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike ịmụ ka esi ede onye kacha ere ahịa, mana ị ga -eburu n'uche na, na nha a, ihu ọma na -arụkwa ọrụ.
Ọ dị mma ugbu a Kedu ka esi ede onye na -ere ahịa kacha mma iji tụlee ịhapụ ọrụ na -agwụ ike gị na ịrara onwe gị nye ide ihe? Ọ dị mma, nke mbụ, ị ga -amatarịrị ihe na -emetụta ịtụle akwụkwọ ka ọ bụrụ onye na -ere ahịa kacha mma, mgbe ahụ ị ga -emerịrị aghụghọ iji mee ka akwụkwọ onye dere gị bụrụ otu.
1 Kedu ihe bụ onye na -ere ahịa kacha mma
2 Otu esi ede onye kacha ere ere: atụmatụ kacha mma
2.1 Bụrụ onye mbụ
2.2 Ị gaghị ahụ anya ma ọ bụrụ na ịnweghị ndị na -agụ ya
2.3 Na -ekwu maka akwụkwọ gị ọbụlagodi tupu ị mechaa ya
2.4 Lezienụ anya maka usoro, isi ihe na -ede onye na -ere ahịa kacha mma
2.5 Akwụkwọ gị bụ azụmahịa
Kedu ihe bụ onye na -ere ahịa kacha mma
Okwu kacha ere ere na -ezo aka, ma ọ bụrụ na anyị tụgharịa ya, na "ire kacha mma." Nke ahụ bụ ikwu, gbadoro anya na ụwa akwụkwọ ọgụgụ, ọ ga -abụ ọrụ nwere nnukwu ọrịre ahịa ma ọ bụ nke na -adọta uche onye na -agụ ya ruo n'ókè nke na ha enweghị ike ịhapụ ya ruo na njedebe wee kwado ya onye ọ bụla.
Njirimara ndị a bụ ihe na -akọwa ihe ga -abụ onye na -ere ahịa kacha mma: akwụkwọ nke na -aga nke ọma, nke ahụ nwere ọtụtụ puku ahịa na onye ọ bụla na -ekwu maka ya. Ihe atụ nke ya? Ọ dị mma, Agba iri ise nke isi awọ, Ogidi nke ụwa, ya, Koodu Da Vinci ... A malitere ha niile wee tụọ egwu na mberede, na-atụgharị ya n'ọtụtụ asụsụ, bụrụ akwụkwọ kacha ere ere n'izu, wdg.
Otu esi ede onye kacha ere ere: atụmatụ kacha mma
Onye edemede ọ bụla chọrọ ka akwụkwọ ya bụrụ nke kacha ere ere. Ma ọ bụ n'ihi na ha na -enwetakwu ego n'ụzọ ahụ, ma ọ bụ n'ihi na ọtụtụ mmadụ na -agụ ha, nke bụ eziokwu bụ na ịnweta nkọwa a adịghị mfe. Ọ gaghị ekwe omume? Ma ọ bụ. Mana enweghị usoro anwansi anyị nwere ike ịgwa gị ka ị nweta ya.
Ihe anyị nwere ike inye gị bụ ọtụtụ atụmatụ ga -aba uru iji hụ na akwụkwọ a nwere ohere karịa imezu ya. Kwadebere?
Bụrụ onye mbụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ide onye kacha ere ahịa, ị ga -ede ya Nye ndị na -agụ akwụkwọ ihe ha na -agụtụbeghị. Nke ahụ na -esiwanyewanye ike, n'ihi na ihe niile mejupụtara, mana ịkwesịrị ịtụle akụkọ ahụ n'ozuzu wee chee uru ọ ga -ewetara onye na -agụ ya, ihe kpatara enwere ike jiri dị iche na akwụkwọ ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere ọtụtụ akwụkwọ gbasara ike nwoke, ịcheghị na otu gbasara ụmụ nwanyị ga -adọta mmasị?
Ị gaghị ahụ anya ma ọ bụrụ na ịnweghị ndị na -agụ ya
Ndị na -agụ ya bụ akụkụ dị oke mkpa nke onye na -ede akwụkwọ, nke mere na ha chọrọ ya ka e ree akwụkwọ ma ree ya. Enweghị ndị na -ege ntị, ha abụghị ihe ọ bụla. Na nke a na netwọkụ mmekọrịta anaghị esiri ike iru.
Ebumnuche gị n'okwu a bụ mepụta obodo nke ndị na -eso ụzọ, nke ndị gị na ha ga -esonye, na ị ga -echebara ha echiche nakwa na ha ma ihe ị na -eme na ihe ị nwetara. N'ụzọ doro anya, ị gaghị enweta ya n'otu ụbọchị, ọ bụghị n'ime abụọ ma ọ bụ atọ. Ma ọ bụ n'ime ọnwa. Ọ nwere ike were ọtụtụ afọ ime nke a. Ma ị ga -anọgidesi ike, nwekwuo nghọta (n'ihi na nke a na -achọwanye n'aka ndị edemede, wdg).
Yabụ, ọ bụrụ na ị na -eme ihere ma ọ bụ na -achọghị ka etinye gị na nzuzo gị, ị nwere ike hapụ nke ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nke ọma wee dee onye na -ere ahịa kacha mma.
Na -ekwu maka akwụkwọ gị ọbụlagodi tupu ị mechaa ya
Nke a bụ mma agha ihu abụọ, yabụ ị ga -akpachara anya na ya. Ọ bụ maka inye ndị na -eso ụzọ ahịhịa ihe ị na -arụ ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịkwalite akwụkwọ ahụ ọbụlagodi mgbe emechabeghị ya.
El ihe mgbaru ọsọ bụ ịmepụta atụmanyaNa ndị na -agụ ya chọrọ ịgụ ya ozugbo enwere ike, na ha hụrụ n'anya ọ bụghị naanị n'akwụkwọ, kamakwa n'usoro okike nke na -ewere ọnọdụ.
Gịnịkwa mere anyị ji asị na ọ bụ mma agha ihu abụọ? Ọ dị mma, n'ihi na asọmpi gị dịkwa ebe ahụ, yana echiche mbụ ahụ ị nwere, ọ bụrụ na ị naghị elekọta ihe ị na -ekwu (ma ị hapụ asụsụ) ha nwere ike i copyomi ya.
Yabụ kpachara anya maka ihe ị na -ekpughe.
Lezienụ anya maka usoro, isi ihe na -ede onye na -ere ahịa kacha mma
Mgbe ị na -ede akwụkwọ kacha ere ere, ị kwesịrị iburu n'uche nke ahụ ị ga -enwe ohere ka mma ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ị nweta ihe na -amasị ọtụtụ mmadụ, Ị naghị eche Dịka ọmụmaatụ, Ajụjụ ọnụ a na Vampire nwere ihe ịga nke ọma n'ihi na vampires, mgbe akwụkwọ pụtara, nwere mmasị. Ọ bụ eziokwu na emesịa enwere ọganihu, mana akwụkwọ ahụ, n'ihi mbido ya, mere ka nke a kwe omume.
Ọ dị mma, ị ga -emekwa otu ihe ahụ, ị ​​ga -agba mbọ ịchọpụta ihe na -amasị ndị mmadụ, ihe ha chọrọ ịgụ. Kedukwa otu esi enweta nke ahụ? Ọ dị mma, ị nwere ike lelee ndepụta nke ndị na -ere ahịa kacha mma, mee nyocha n'etiti ndị na -eso ụzọ gị, ma ọ bụ mara ihe gbasara ọdịbendị na akwụkwọ iji chọpụta ihe na -eme ugbu a (kamakwa nke ọdịnihu, ebe ọ bụ na edeghị akwụkwọ n'otu abalị. echi, obere ma ọ bụrụ na ịchọrọ onye na -ere ahịa kacha mma).
Akwụkwọ gị bụ azụmahịa
Ọ dị mma iche na akwụkwọ bụ akụ, na ị nyela ihe niile ị nwere ike ime nke ọma na ihe ịchọrọ bụ ịga nke ọma. Mana echefula na ọ bụ azụmahịa. Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ọfọn, ị ga -eji isi chee echiche. Ụlọ ọrụ ọ bụla na -amalite imepụta ngwaahịa n'amaghị ma ọ ga -ere. Otu ihe ahụ na -emekwa gị.
Ọ bụ ya mere, inwe atụmatụ dị oke mkpa. Ndị ọkachamara na -atụ aro ka ọ dịkarịa ala isii tupu oge eruo. Nke ahụ bụ, ị ga -amalite iche maka ihe niile ị ga -achọ, kwalite, gbasaa, wdg. na otutu oge.
N'ezie mmetụta na nrọ efu enweghị ike ibuga gị nke ị tinyere na ederede gị, ị ga -eche na ọ bụ ụlọ ọrụ ma nwee isi dị mma iji nweta ebumnuche ahụ nke idere onye na -ere ahịa kacha mma.
Tupu, n'oge na mgbe. Mgbe niile. Ekwela ka akwụkwọ gị chefuo n'ihi na n'ezie onye na -ere ahịa kacha mma apụtaghị na ọ ga -adị n'oge na -adịbeghị anya, mana na, n'otu oge, ọ na -adọta mmasị nke ukwuu nke na ọ malitere ire.
Nke a mere nkwalite ji dị oke mkpa. N'ọtụtụ ọnọdụ ọ gụnyere itinye ego maka ego n'ụdị akwụkwọ efu (na akwụkwọ na dijitalụ) maka ndị mmadụ inyocha gị, ikwu maka gị na mgbasa ozi, wdg. Ihe kachasị mma na nke a bụ ịhazi mmefu ego dabere na ohere gị.
Site na ihe ndị a niile, anyị agaghị ekwe gị nkwa na ị ga -eme nke ọma mgbe ị na -ede akwụkwọ kacha mma. Mana ị nwere ike ịbịaru nso na imezu ya. Ị nwere ndụmọdụ ọzọ ịhapụ anyị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Otu esi ede onye kacha ere ere